Egypt hanokatra ny Grand Egypt Museum amin'ny taona 2018 | Vaovao momba ny dia
Egypt hanokatra tranombakoka Grand Egypt amin'ny taona 2018
Maria | | Ejipta, Cairo
Sary | ABC
Efa an'arivony taona maro izay no lasa hatramin'ny nanaovan'ireo farao ny heriny tany Ejipta Fahiny, fa ny majia sy zava-miafina nambaran'ity tany ity dia tsy nanjavona.
Nandroso tamin'ny androny, ny egyptiana tamin'izany fotoana izany dia nanana fahalalana matematika be dia be izay nanamboaran'izy ireo fananganana lehibe ary koa fahalalana ara-pitsaboana sy anatomika ahafahan'izy ireo mitahiry faty manoloana ny fandehan'ny fotoana. Tamin'izany no nametrahan'izy ireo lova lehibe (tempoly, sphinxes, piramida, fasana) hahafahantsika mianatra ny kolontsaina sy ny fiainana tamin'ny andro taloha tao amin'io faritra Mediterane io.
Hatramin'izao, ny ampahany tsara amin'ny harena sarin'i Egypta dia hita tao amin'ny Tranombakoka Egyptianina any Kairo, izay misy zavatra maherin'ny 120.000 sokajiana eo anelanelan'ny sary vongana, sary hosodoko, sambo, fanaka na zavatra fandevenana. Saingy ity tranombakoka ity dia nanjary kely loatra ka tsy tokony hasehon'i Egypt. Araka izany, amin'ny taona 2018 dia hotokanana ny tranombakoka Great Egypte izay ho lasa tranombakoka arkeolojika lehibe indrindra manerantany.
1 Fa maninona no tranom-bakoka egyptiana vaovao?
2 Hanao ahoana ny tranombakoka vaovao?
3 Inona no haseho amin'ny fisokafana?
Fa maninona no tranom-bakoka egyptiana vaovao?
Nosokafana tamin'ny 1902, ny Tranombakoka Egyptianina taloha tao Kairo no ivon-tantara fampirantiana ny kolontsaina ejipsianina sy ny farao. Na izany aza, ny fahafaham-po sy ny tsy fahampian'ny toerana dia nahatonga ny fananana toerana vaovao noho ny tsy fahafahany manitatra ity tranombakoka ity, noheverina ho vatosoa maritrano tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX izay nataon'i Marcel Dourgnon.
Folo taona lasa izay, nanapa-kevitra ny governemanta hanangana fotodrafitrasa vaovao hampiantranoana ireo entana rehetra izay noterena hitahiry ao anaty trano fitehirizam-bokatra na hampiseho azy ireo misavoritaka, satria ny Tranombakoka Egyptianina taloha dia nanana toerana 12.000 fotsiny fanangonana izay mihoatra ny 150.000.
Hanao ahoana ny tranombakoka vaovao?
Sary | Izao tontolo izao
Ny Great Museum Museum dia noforonina tamin'ny taona 2010 avy amin'ny orinasa Irlandey Heneghan Peng Architects, taorian'ny fifaninanana iraisam-pirenena izay nandraisan'ny firenena 83 anjara. Tamin'ny taona 2011 dia nanemotra ny asa ny Lohataona Arabo ary tamin'ny 2013 no nanombohan'izy ireo nanangana ity tranombakoka lehibe ity izay manana velarana 224 XNUMX metatra toradroa.
Ny Great Museum Museum dia hipetraka eo amin'ny 50 hektara ary ho hita roa kilometatra andrefan'ny Nezerropolis Giza ary akaikin'ny tanànan'i Kairo. Izy io dia ho endrika toy ny telozoro beveled ary ny rindrina voalohany amin'ny tranombakoka dia vita amin'ny alabaster translucent izay havaozina mandritra ny andro. Ahitana sarivongana ejipsiana maro ny vavahady fidirana voalohany.
Mikasika ny sehatry ny fampirantiana ny Tranombakoka Great Egypt, dia hanana 93.000 m2 eo ho eo izy io ary hizara galeria lehibe telo misy rindrina fitaratra ary fahitana tsara an'ireo piramida.
Ity tranombakoka vaovao ity dia hisy fanangonana zavatra maherin'ny 100.000 fa tsy hanana toerana hanaovana fampirantiana fotsiny fa hanana trano fisakafoanana, trano fisakafoanana, efitrano fitahirizana ary trano fitahirizana, tranombakoka ho an'ny ankizy, efitrano fihaonambe, trano fanampiana ary zaridaina kanto tsara tarehy izay mahazo aingam-panahy amin'ny fotoanan'ny farao.
Toy izany koa, ny tranombakoka Great Egypt dia hanana ny ivon-toerana fitehirizana sy famerenana amin'ny laoniny lehibe indrindra manerantany. Laboratoara efa ho 20 no hanao asa fikarohana momba ireo sombin-javatra 50.000 mbola tsy naseho izay hijanona ao anaty trano fitehirizan-trano ary ho azon'ny mpikaroka sy ny manam-pahaizana manerantany.
Manantena ny hitsidika olona dimy tapitrisa eo ho eo isan-taona ao amin'ny Grand Egypt Museum ny manampahefana egyptiana miaraka amina olona 10.000 XNUMX isan'andro.
Inona no haseho amin'ny fisokafana?
Sary | Taringa!
Amin'ny fotoana fitokanana ny Tranombakoka Egyptianina Lehibe, dia mavesatra ny 4.500 ny entana fasana Neb-jeperu-Ra Tut-anj-Amun haseho amin'ny besinimaro. Ny roa ampahatelon'izy ireo no voalohany hatramin'ny nahitan'i Howard Carter tamin'ny 1922 ny fasan'ny farao fantatra amin'ny anarana hoe Tutankhamun. Ny ampahany amin'ireo sombin-javatra ireo dia hafindra avy amin'ny trano fitahirizana am-polony miparitaka eraky ny firenena ary avy amin'ny Tranombakoka Egyptianina ao amin'ny Kianja Tahrir any Kairo, izay misy ny saron-tavan'ilay farao zaza.
Nanjaka teo anelanelan'ny 1336 sy 1327 talohan'i Kristy io mpanjaka io. C. ary maty mbola tanora noho ny aretin-tongotra tamin'ny faha-19 taonany. Toy ny fomban-drazana, dia nalevina niaraka tamin'ny harena sarobidy indrindra ho an'ny any ankoatra izy.
Amin'ity fampirantiana ity dia te hampiseho ny fomba fiainan'ity pharaoh ity any amin'ny Thebes (Luxor) taloha ny Great Egypt Museum. ary inona ny akanjo, kiraro, sakafo na fialam-boly tamin'izany fotoana izany. Tsy misy isalasalana, fanambarana tsara hanintona ny fahalianan'ny mpizahatany sy ny manam-pahaizana manerana ny planeta.
Na izany aza, manana harena be dia be i Egypte ka aorian'ny fisokafan'ity trano lehibe ity dia hanohy hampiseho ny fahalehibiazan'io sivilizansa io ny tranombakoka amin'ny alàlan'ny fampirantiana hafa.
Te hitsidika ny Tranombakoka Egyptianina Lehibe ve ianao amin'ny ho avy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Africa » Ejipta » Egypt hanokatra tranombakoka Grand Egypt amin'ny taona 2018
Kairo, mihaona amin'ny 'renin'izao tontolo izao'
Zavatra tokony hatao maimaim-poana ao amin'ny tanànan'i Lisbon